မွငျတာနဲ့ ကွောကျသှားပွီလား… | yathar Magazine
Halloween Day ကို October 31 ရကျနတှေငျကမ်ဘာအရပျရပျမှာ ပွုလုပျကငျြးပလကျြရှိပါတယျ။ Halloween Day မှာ Treat လုပျကွတဲ့ မုနျ့တှကေ ပုံစံအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ အဲ့ထဲကမှ ကမ်ဘာ့အရပျရပျမှာ Treat ကွတဲ့မုနျ့တှအေမြားကွီးထဲက ကွောကျစရာ အကောငျးဆုံး မုနျ့မြိုးစုံကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ဒီ cupcake လေးက သငျ့ကို တကယျကိုကျတတျသညျ!!! ဒီ cupcake လေးကို cookiedoughshop က တီထှငျထားတာဖွဈပွီးတော့ fondant နဲ့ Vanilla cupcake ကို Zombie Mouth ပုံစံဖွဈအောငျ ဖနျတီးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါလေးကတော့ ပေါငျမုနျ့ခြောငျးလေးဖွဈပါတယျ။ ပေါငျမုနျ့ခြောငျးလေးကိုမှ လကျသညျးနရောမှာ နကွောစလေ့ေးကို အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။
ဒါလေးဆိုရငျရော လနျ့သှားကွသေးလား။ ဒါလေးကတော့ ပနျးသီးကို ပုံဖျောထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါလေးကတော့ ကွောကျစရာတော့ သိပျမကောငျးတဲ့အပွငျ ခဈြဖို့တောငျကောငျးနသေလိုပါပဲနျော။ ဒီမုနျ့လေးတှကေတော့ စားခငျြစဖှယျ Donuts လေးတှပေါ။
ဒါလေးကတော့ သိပျကွောကျဖို့ မကောငျးဘူးဟုတျ။ ဒါလေးကလညျး ကိတျလေးပါ။
ဒါလေးကိုရော ကွောကျကွလား.. ဒါလေးကတော့ ကိတျလေးပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါလေးကိုကွညျ့ပွီး ကွောကျနကွေပွီလား…. မကွောကျပါနဲ့နျော။ ဒါလေးကို အသားပွားတှနေဲ့ ပွုလုပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါလေးတှကေတော့ နိုငျငံတကာမှာ ကငျြးပလကျြရှိတဲ့ Halloween ပှဲတှမှော အထူးပွုလုပျထားတဲ့ ကွောကျစရာပုံစံနဲ့ အစားအသောကျတှဖွေဈပွီးတော့ Foodie တို့ဆိုရငျရော ဘယျပုံကို ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးလို့ ထငျပါသလဲ။
Halloween Day ကို October 31 ရက်နေတွင်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ပြုလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ Halloween Day မှာ Treat လုပ်ကြတဲ့ မုန့်တွေက ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်မှာ Treat ကြတဲ့မုန့်တွေအများကြီးထဲက ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး မုန့်မျိုးစုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီ cupcake လေးက သင့်ကို တကယ်ကိုက်တတ်သည်!!! ဒီ cupcake လေးကို cookiedoughshop က တီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ fondant နဲ့ Vanilla cupcake ကို Zombie Mouth ပုံစံဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ ပေါင်မုန့်ချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ချောင်းလေးကိုမှ လက်သည်းနေရာမှာ နေကြာစေ့လေးကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးဆိုရင်ရော လန့်သွားကြသေးလား။ ဒါလေးကတော့ ပန်းသီးကို ပုံဖော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ ကြောက်စရာတော့ သိပ်မကောင်းတဲ့အပြင် ချစ်ဖို့တောင်ကောင်းနေသလိုပါပဲနော်။ ဒီမုန့်လေးတွေကတော့ စားချင်စဖွယ် Donuts လေးတွေပါ။
ဒါလေးကတော့ သိပ်ကြောက်ဖို့ မကောင်းဘူးဟုတ်။ ဒါလေးကလည်း ကိတ်လေးပါ။
ဒါလေးကိုရော ကြောက်ကြလား.. ဒါလေးကတော့ ကိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးကိုကြည့်ပြီး ကြောက်နေကြပြီလား…. မကြောက်ပါနဲ့နော်။ ဒါလေးကို အသားပြားတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေကတော့ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ Halloween ပွဲတွေမှာ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ကြောက်စရာပုံစံနဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ Foodie တို့ဆိုရင်ရော ဘယ်ပုံကို ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ။